Norway oo dib u celinaysa 1,600 oo Somali ah - iftineducation.com
iftineducation.com – Waaxda Socdaalka dowladda Norway ayaa sheegtay in ay dib u soo celin doonto Qaar ka mid ah Qaxootiga Somalieed ee ku sugan dalkeeda.
Dowladda Norway ayaa sheegtay in dadkaan ay haboon tahay in dib loogu celiyo dalkooda , madaam waaxda Socdaalka dalkaasi ay sheegtay in Somaliya ay amaan tahay.
Waaxda socdaalka ayaa ku dhawaaqday in ay dib u eegi doonto sharciga la siiyey dad Somali ah oo gaaraya 1,600 qof oo ku nool Qaar ka mid ah gobolada dowladda Norway.
120 qof oo ka mid ah dadkaasi ayaa mar hore loo direy warqada digniinta sharci kala noqoshada ee dalka Norwey.
Sylvi Listhaug waa Wasiirada arrimaha soo galootiga dowlada Norway, waxaana ay sheegtay in tilaabadaan ay timid ka dib markii ay bateen dadka Qaxootiga ah ee ka imaanaya dalalka Qaarada Afrika , islamarkaana soo gaaraya gudaha dalka Norway.
Dadka ay sheegtay in ay soo celinayso dowladda Norway ayaa badankooda waxa ay sharciyada heleen sanadkii 2012 kii sida ay sheegtay Wasiirada.
Qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Norway ayaa cambaareeyay tilaabada ay qaaday dowladda Norway, waxaana ay sheegeen in dadkaasi aysan ku laaban karin Soomaaliya sababo la xariira amaankooda.
Raga markey galmada sameynaayaan qeyliya oo…